Qol - Wikipedia
Maqaalka "Maqsin" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Qolal kala duwan
Qol (Af Ingiriis : room; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) sidoo kale loo yaqaano Maqsin waa qeybaha yaryar ee loo sii kala qeybiyo dhismeha. Aqaladu waxay ka kooban yihiin qolal badan, kuwaasi waxaa ka mid ah: Qolka jiifka, Qolka fadhiga, Qolka cuntada (Qolka qadada), Musqul (Suuli iyo Kaniif), Qolka qubeyska, Madbakh (Jiko), Qolka martida, Qolka waxbarashada (Maktabad), Qolka dhaqista (Qolka qasaalada), Qolka keydka iyo kuwo kale.
Sida badan qolku waa mid ka mid ah unugyasa dhisme ee aqal ama dhisme guri ka kooban yahay. Tusaale ahaan, qolka fadhiga, qolka cuntada, qolka jiifka, qolka martida iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dhacda hal qol mararka qaar kaligiis la diso kaasi oo ah aqal hal qol ah. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qol&oldid=216053"